Digniin amni oo loo diray shaqaalaha UN-ka | KEYDMEDIA ONLINE
Digniin amni oo loo diray shaqaalaha UN-ka
Waxaa soo baxday xog tilmaameysa in loo digay xarumaha dowladda, shaqaalaha iyo ciidamada, kadib digniino amni oo ka yimid Safaaradaha shisheeye.
MUQDISHO, Soomaaliya – Waxaa sare u kacay saacadihii la soo dhaafay ka digidda qaraxyo ka dhaca Caasimadda Muqdisho, waxaana fariimo loo diray shaqaalaha qeyb ka mid ah safaaradaha shisheeye ee deggan Xerada Xalane, kuwaas oo lagu wargaliyay in ay ka fogaadaan huteellada waaweyn, xaafiisyada Dowladda, goobaha dalxiiska iyo jidka Maka-Al-Mukarama.
Waxaa soo baxaya warar sheegaya in ay magaalada ku jiraan gawaari la doonayo in lagu qarxiyo goobaha dadku isugu yimaadaan si loo badalo muujadda kiiska Ikraan Tahliil, oo NISA af-duubatay 26-kii June 2021.
Digniinta qaraxyada, waxaa aalaaba ugu horreyn loo diraa shaqalaha UN-ka Soomaaliya, waxaana hadda cabsi weyn laga qabaa Gobolka Banaadir ay qaraxyo xooggan ka dhacaan shanta maalin ee soo aaddan.
Shaqaalaha Dowladda ayaa dhankooda helay fariimo amni oo ku saabsan in ay taxaddar muujiyaan shanta maalood ee nagu soo wajahan.
Dowladda Federaalka, ayaa inta badan ka hor tagin qaraxyada la sii sheegay, rajada hadda lagu fashilin karo qaraxyada ayaana ah mid aad u hooseysa maadaama Hay’addii NISA, ay dhex muquuraneyso fadeexado waawyn.
Tan iyo markii ay talada la wareegeen kooxda Fahad iyo Farmajo hoggaamiyaan, waxaa dalka caan ka ahaa dhaqan amni, kaas oo ah in dhacdo kasta oo saameyn leh lagu damiyo dhacdo kale oo ka weyn.